Toeram-pisakafoanana sarony mavo - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Mora ny manodina ny fako eto amin'ny morontsiraka Afovoany ary lasa fanao isan'andro izay tena misy tombony ho an'ny tontolo iainana. Rehefa manodina ianao dia manampy amin'ny fitsitsiana ireo harena voajanahary manan-danja toy ny mineraly, hazo, rano ary solika. Mitsitsy angovo ihany koa ianao, mitsitsy toerana fanariam-pako, mampihena ny entona mandatsa-dranomaso ary mampihena ny loto.
Ny fanodinana dia manakatona ny loharanon-karena, miantoka ny harena sarobidy sy azo ampiasaina tsy ho very maina. Averina amin'ny laoniny kosa izy ireo, ka tsy dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainantsika amin'ny dingana fanamboarana indray fanindroany.
Natao ho an'ny fanodinana fotsiny ny koveta sarony mavo. Angonina indroa isan-kerinandro io dabam-pako io amin'ny andro mitovy amin'ny dabam-pako mena mena misy anao, fa amin'ny herinandro mifandimby mankany amin'ny dabam-boankazonao.
Tsidiho ny Andro fanangonana Bin pejy hahitanao hoe andro inona no foanana ny dabao.
Ireto manaraka ireto dia azo apetraka ao amin'ny dabam-pako fanodinana sarony mavo:
Taratasy sy baoritra
ronono vaovao sy baoritra ranom-boankazo
birao sy taratasy informatika
boaty pizza (madio)
Tavoahangy plastika henjana sy fitoeran-javatra
Ny tavoahangy plastika na fitoeran-javatra ampiasaina ao an-dakozia, efitra fandroana na fanasan-damba, ao anatin'izany:
tavoahangy ranon-javatra fanasan-damba
sarony (aleo misaraka amin'ny tavoahangy, fitoeran-javatra na siny)
margarine sy dibera
tavoahangy shampoo sy conditioner
frezy sy voatabia punnets
Ny harona plastika malefaka sy ny fonony dia azo averina ao amin'ny Tavoahanginao Yellow Lid raha toa ka misoratra anarana amin'ny Program Curby ianao ary mampiasa ny harona sy marika fanangonana mavo manokana. kitiho eto raha mila fanazavana fanampiny sy misoratra anarana amin'ny programa.
Vata metaly, kapoaka aerosol ary lovia foil
kapoaka fanariana rivotra
fametahana zaza amam-behivavy
tampon-tavoahangy (aleo misaraka amin'ny tavoahangy)
baomba famafazana kapoaka
famafazana menaka fandrahoan-tsakafo
lovia barbecue foil (voankazo azo ampiasaina)
sarony (aleo misaraka amin'ny tavoahangy na siny)
lovia fandokoana (foana ary latsaky ny 15 litatra)
kapoaka sakafo ho an'ny biby fiompy
Tavoahangy sy siny vera maitso, volontany ary mazava
Zavatra tsy ekena ao amin'ny dabam-pako fanodinana sarony mavo:
Zavatra tsy ekena ao amin'ny dabam-pako fanodinana sarony mavo
Akanjo, lamba rongony ary kiraro
Fiainana lava / baoritra UHT
Kaopy taratasy fanariana (anisan'izany ny kaopy kafe)
Siny plastika, kilalao ary nick-nacks
Fako ankapobe anisan'izany ny fako sy ny fako sakafo
Ceramic, globe maivana ary Pyrex
Fako mampidi-doza, loko ary menaka
Fako ara-pitsaboana na syringe
Vary entona, cannister butane ary hydrant afo
FANAMARIHANA: Ny harona plastika malefaka sy ny fonony dia azo averina ao amin'ny Tavoahanginao Mavo raha toa ka misoratra anarana amin'ny Program Curby ianao ary mampiasa ny harona sy marika fanangonana mavo manokana. kitiho eto raha mila fanazavana fanampiny sy misoratra anarana amin'ny programa.
Mety tsy ho voaangona ny entana diso ao anatin'ny dabam-panaodinao.
Mila fanazavana fanampiny? Jereo ny horonan-tsarinay farany mampianatra anao momba ny zavatra azonao atao sy tsy azonao averina ao amin'ny Central Coast.
COVID-19: Fomba fanariana fako azo antoka
Izay olona asaina mitoka-tena, na ho fitandremana na satria voamarina fa voan'ny Coronavirus (COVID-19), dia tokony hanaraka ireto torohevitra manaraka ireto mba hanariana ny fako ao an-tranony mba hahazoana antoka fa tsy miparitaka amin'ny alalan'ny fako manokana ny viriosy:
• Tokony hapetraka tsara ao anaty harona plastika na lamba fanasan-damba ny olona tsirairay, toy ny tavy, fonon-tanana, servieta taratasy, famafana ary saron-tava;
• Ny kitapo dia tokony ho feno tsy mihoatra ny 80% mba ho azo afatotra tsara tsy misy fiparitahana;
• Ity harona plastika ity dia tokony hapetraka ao anaty harona plastika hafa ary afatotra tsara;
• Ireo kitapo ireo dia tsy maintsy ariana ao amin'ny dabam-pako mena misy sarony.
Torohevitra momba ny fanodinana
Aza esorinao: Alefaso moramora ao anaty daba ny entanao azo averina. Tsy hanokatra kitapo plastika ny mpiasa ao amin'ny foibe fanodinana, ka izay rehetra apetraka ao anaty harona plastika dia hiafara amin'ny fanariam-pako.
Famerenana zo: Ataovy azo antoka fa foana ny siny, tavoahangy ary kapoaka ary tsy misy rano na sakafo. Esory ny ranonao ary esory izay sisa tavela. Raha tianao ny hanasa ny fanodinanao dia ampiasao rano lovia taloha fa tsy rano madio.
Inona no mitranga amin'ny fanodinanao?
Isaky ny roa herinandro ny Cleanaway dia manary ny dabam-pamokaranao ary manatitra ny fitaovana any amin'ny Materials Recovery Facility (MRF). Ny MRF dia orinasa lehibe iray izay manasokajy ireo entana azo amboarina ao an-tokantrano ho toy ny reniranon'ny entana tsirairay, toy ny taratasy, metaly, plastika ary fitaratra mampiasa milina. Ny mpiasan'ny MRF (antsoina hoe Sorters) dia manaisotra potipoti-javatra betsaka (toy ny harona plastika, akanjo, lamba maloto ary fako sakafo) amin'ny tanana. Rehefa voasokajy sy voahodina ny zavatra azo averina dia entina any amin'ny foibe fanodinana ao Aostralia sy any ampitan-dranomasina, izay amboarina ho entana vaovao.